मनाङविरुद्धको खेल पछि थ्री स्टारका अनिल गुरुङ भन्छन्… | | Neplays.com
मनाङविरुद्धको खेल पछि थ्री स्टारका अनिल गुरुङ भन्छन्…
नेप्लेज, ६ मंसिर । नेपाली फुटबलमा अनिल गुरुङ एक चर्चित नाम हो । व्यवसायिक फुटबलको सुरुआत थ्री स्टारबाट गरेको अनिलले अहिले ए डिभिजन लिगमा मनाङसँगको सहयात्रामा पूर्ण विराम लगाउँदै पुनः थ्री स्टारमा आएका छन् । शहीद स्मारक ए डिभिनज लिग फुटबलमा थ्री स्टारले तीन वटा खेल खेल्दा पहिलो हार पुरानै प्रतिद्वन्द्वी मनाङ मस्र्याङ्दीसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भयो । यसअघिका २ वटा खेलमा सब्सीच्यूट खेलाडीका रुपमा मैदान प्रवेश गर्ने अनिल आज भने सुरुमै मैदान उत्रन पाए । ५८ मिनेट खेलेका अनिललाई रञ्जन विष्टले रिप्लेस गरेका थिए । खेल सकिए पछि हामीले अनिल गुरुङसँग छोटो कुराकानी गरेका छौं ।
समग्र प्रदर्शन कस्तो रह्यो ?
धेरै बर्ष पछि हामी ए डिभिजन लिग खेल्दै छौं । अझ भनौ नेपालका टप २ टिम थ्री स्टार र मनाङको खेल भने पछि बढी अपेक्षाकृत नै हुन्छ । आज एन्फाको यो थोरै दर्शक अट्ने प्याराफिट पनि खचाखच भरिएको थियो । यदि यो म्याच दशरथ रंगशालामा हुन्थ्यो भने त्यहाँ पनि दर्शकको ठूलो उपस्थिीति हुने थियो । हार जित आफ्नो ठाउँमा छ । जुन नेपाली फुटबललाई मायाँ गरेर दर्शकहरु आउनु भयो यो नेपाली फुटबलका लागि सुखद् पक्ष हो ।
मनाङ र थ्री स्टारको गेम किन टफ र रफ हुन्छ?
नेपाली फुटबलमा मनाङ मस्र्याङ्दी र थ्री स्टार भनेका ठूला क्लबहरु हुन् । यी दुई टिममा राष्ट्रिय खेलाडीहरु र उत्कृष्ट विदेशी खेलाडीहरुको जमघट हुने भएकाले टफ गेम हुनु स्वभाविक पनि हो । नेपाली फुटबलको माहोलले गर्दा पनि यस्तो वातावरण निर्माण हुन्छ ।
पूर्व क्लबविरुद्ध खेल्दा कस्तो महशुस भयो ?
मैले क्लब फुटबलको यात्रा २००५ मा थ्री स्टारबाट शुरु गरेको हो । त्यसपछि मनाङ गए । त्यहाँ लामो समय खेलेर यसै सिजन थ्री स्टार आए पछि मनाङ विरुद्ध मैदान उत्रदा त्यस्तो खासै फरक परेन र पर्नु पनि हुँदैन । व्यवसायिक फुटबल खेलाडीले यस्ता कुराहरु सोँच्नु हुँदैन ।